खरिद-विक्री Archives - Page9of 11 - halokhabar.com खरिद-विक्री Archives - Page9of 11 - halokhabar.com
नगदेबालीबाट रु चवालिस अर्ब
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र नगदेबालीबाट रु ४४ अर्ब तीन करोड ७२ लाख २५ हजार आम्दानी भएको छ ।
चालु आवमा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब सात लाख ५० हजार मेट्रिक टनले वृद्धि हुने भएको छ । गत वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा चालु आव २०७३/७४ मा ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
किसानले अर्गानिक चिया उत्पादनका लागि सरकारले अनुदान सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अर्गानिक चियाको माग अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरसम्म रहेकाले मागअनुसारको चिया उत्पादन गर्न किसानले सरकारी अनुदानको माग गरेका हुन् ।
जाजरकोट जिल्लाको ८२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ११ हजार ५५० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । उत्पादित आलुमध्ये दुई हजार ८८७ मेट्रिक टन तरकारी जिल्लाबाहिर निर्यात भएको थियो ।
कृषि पर्यटनले उकासेको काउलेपानी
दरबारको ऐतिहासिक पक्ष र मौलिकताको अवलोकन गर्न आउने गरेका पर्यटक देख्दा भाग्ने महिला अहिले आफैँले होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरेपछि पर्यटकसँग रमाउने गरेका हुन् । लमजुङ जिल्लाको मुख्य सहर बेसीसहर हो भने काउलेपानी गाउँसहर हो ।
जिल्लामा आँपको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । जिल्लामा ७३० हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा अम्रपाती, दशहरी, चल्लिका, लङ्गडा, माल्दा, चौसा आदि उन्नत जातका आँपको खेती हुने गरेको छ ।
हरियो चियापत्तीको मूल्य विवाद सुल्झाउन आज विहीवार बिर्तामोडमा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा नेपाल चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । झापाली साना किसान चिया व्यवसायी संघ र चिया उत्पादक संघबीच हरियो पत्तीको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद यथाशीध्र सुल्झाउन सरोकारवाला सबै सहमत भएका छन् ।
बोर्डले गत बर्षको उक्त तीन महिनाको मूल्य क्रमशः रु. १२.८७, रु. ११.६५ र रु. १२.४७ निर्धारण गरेको थियो । १६% गुणस्तर अर्थात दुई पात एक सुईरालाई आधारमानी हरियो चियापत्तीको मूल्य बोर्डले निर्धारण गरेको बताइएको छ । बोर्डले निर्धारण गरेको मूल्य विना आधारको रहेको भन्दै चिया उत्पादक संघले आपत्ति जनाउँदै आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरेको बताइएको छ ।